New Zealand: Sheekoonyinka halyaynimada ah ee ka soo baxaya weerrarkii Masaajidda | Saxil News Network
Weerarkaas ayay ku tilmaantay “mid argagixisanimo”. Galinka dambe ee Isniintana golaheeda wasiirrada ayaa gorfayn doona wax ka badalidda shuruuxda qoryaha ee dalkaas.
Image captionCabdulcasiis ayaa sheegay in uu mashiin yar ku tuuray ninkii weerarka soo qaaday
Ra’iisulwasaaraha Pakistan Imran Khan ayaana sheegay in la maamuusi doono Rashiid.
Xuquuqda Sawirka @ImranKhanPTI@IMRANKHANPTI
Brenton Tarrant oo ah ninka weerarkan “argagixisada ah” gaystay ayaa Sabtidii maxkamad ka soo muuqday isaga oo gacmaha ka jeebaysan oo qaba dharka maxaabiista, kaameerada markii uu arkay ayuuna qoslay. Waxaa lagu soo oogay hal dacwad oo dil ah, waxaana la filayaa in ay dacwado dheeri ah lagu soo oogi doono.